Real Madrid ayaa hoggaanka u heysa La Liga
Real Madrid ayaa guul ay u qalantay ka gaadhay Celta Vigo, taas oo ku fashilantay in ay soo bandhigto qaab ciyaareedkeeda waxayna hogaanka ciyaarta kula wareegtay 2-0.
Los Blancos ayaa hogaanka qabatay 2021 laakiin Atletico ayaa ku soo laaban doonta hogaanka horyaalka hadii ay badiso berri.
Inkasta oo ay Real heshay dhibco goolal, hadana waxa jiray fursado yar intii lagu jiray qaybtii hore ee ciyaarta oo Real ayaa ku gacan saraysay kubad haysashada
Sax, kubbada ayaa ku jirtay gacantooda waxayna sameeyeen isku dayo kala duwan laakiin cidna umay muuqan inay khatar ku jiraan.
Goolka Real wuxuu yimid bilowgii ciyaarta markii Lucas Vazquez uu shabaqa soo taabtay daqiiqadii lixaad ka dib baas uu ka helay Marco Asensio.
Real, khadkooda dhexe wuxuu ahaa mid aad ufiican waana halka hal abuurka laga soo bilaabay, iyadoo Celta Vigo ay sheeganeyso inay ciyaarta daahay oo ay si aad ah ugu tiirsan tahay soo laabashada laakiin aan qatar aheyn.
Intii lagu jiray qeybtii labaad, Real ayaa inta badan gacanta ku heysay kubad haysashada iyo gool labaad oo la filan karay marka loo fiiriyo sida ay ugu heellan yihiin Celta Vigo
Isku daygaas, Real ayaa dhalisay goolkoodii labaad ee Marco Asensio halka uu ka shaqeeyay Lucas Vazquez daqiiqadii 53-aad.
Dhacdada kadib, Real ayaa goolal badan laga dhaliyay kooxda Celta Vigo laakiin nasiibdarro ma yeelan. Martida ayaa ku tiirsaneyd soo laabashada laakiin waxay sameeyeen go’aamo deg deg ah markii Real ay qaadatay Hazard daqiiqadii 74aad. Marco Asensio
Celta Vigo ayaa ciyaarta ku soo baxday laakiin daafaca Real ayaa feejignaa oo Zidane ayaa dhaliyay seddex daqiiqo daqiiqadii 85aad Vinicius Junior, Oedegaard iyo Valverde.
Celta Vigo ayaa la soo baxday dhamaadka ciyaarta laakiin daafaca Real ayaa taxaddar ka muujiyay sida uu goolhayaha u badbaadiyay kubad halis ah, waxaana Zidane dhaliyay seddex daqiiqo daqiiqadii 85aad Vinicius Junior, Oedegaard iyo Valverde.
acquittal of Saïd Bouteflika and 3 others
Arsenal ayaa xasuuq ba’an u gaysatay sanadka cusub